एमडीबाट समाजसेवा गर्न उम्मेदवार बनें, जनताले न्याय गर्छन् ः डा. यादव - Marganugami Daily
Marganugami Daily Interview एमडीबाट समाजसेवा गर्न उम्मेदवार बनें, जनताले न्याय गर्छन् ः डा. यादव
एमडीबाट समाजसेवा गर्न उम्मेदवार बनें, जनताले न्याय गर्छन् ः डा. यादव
Marganugamidaily प्रकाशित समय 4:29:00 AM
डा. सुभासचन्द्र यादव पेसाले विशेषज्ञ डाक्टर हुन् । डाक्टरी पेशाबाट धेरै पैसा कमाउन सक्ने हैसियत भए पनि उनी राजनीतिबाटै समाजसेवा गर्न सकिन्छ, न्याय दिलाउन सकिन्छ भनेर राजनीतिमा होमिएका छन् । यादव कांग्रेस कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवका छोरा हुन् । तर, यादवका छोराभन्दा सुभास सामाजिक अभियन्ताको रुपमा बढी परिचित छिन् । उनै यादव यसपटक सिरहा ३ (ख) बाट प्रदेशसभामा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका छन् । उनको प्रतिस्पर्धीमा वाम गठबन्धनबाट एमाले प्रमोदकुमार यादव फोरम राजपाबाट मनोरंजन गोइत चुनावी मैदानमा छन् । उनै यादवले आफू समाज बदल्नकै लागि उम्मेदवार बनेको यसरी बताए ः
देशमा संविधान बनेलगत्तकै राजनीतिक दलबीच संविधान कार्यान्वयनका लागि एकमत हुनुपर्ने अवस्था छ । तर, कम्युनिष्ट दलहरु वाम गठबन्धन बनाएर देशलाई वीकरणको राजनीतिमा लान लागे । कम्युनिष्ट हरुले वीकरण बढाउँदै एकलौटी शासनको सपना देखेका छन् । तर, हामी उनीहरुलाई एकलौटी अघि बढ्न दिन हुँदैन भन्नेमा छौं । लोकतन्त्रको रक्षाको लागि र लोकतन्त्रको स्थायित्वको लागि अनि संघीयता कार्यान्वयन गर्दै यसलाई बचाउनका लागि कांग्रेस लागेको छ । त्यसैले यो पार्टीका तर्फबाट मैंले उम्मेदवार दिएको छु ।
हामीले सविधान बनाएका छौैै । संविधानले धेरै अधिकार जनता लाई दिएको छ । तर, संविधानले मधेस, दलितसहित पछाडि परेका समुदायलाई थप न्याय दिलाउन बाँकी छ । संविधान संसोधनका बेला मधेसका एजेण्डामा एमालेले विपक्षमा भोटिङ गरेर उ मधेसविरोधी कित्तामा दरिएको छ । अर्को्तिर मधेस केन्द्रित दलहरुले मात्रै पनि मधेसका मागलाई पूरा गर्न सक्दैनन् । यसका लागि पुरानो र लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसले अगुवाई गर्नुपर्छ । त्यसैले मधेस का मुद्दालाई सम्बोधन गर्नु पनि मेरो प्रमुख एजेण्डा हुन् ।
अर्को्तिर समाजमा राजनीति प्रति वितृष्णा आएको छ । काम नपाएका व्यक्तिले मात्र राजनीति गर्ने हुन, भ्रष्टाचार गर्छन, पेशा व्यवसाय गरेर आफ्नो काम गरेकाहरु राजनीतिमा आउँदैनन् र निस्वार्थ राजनीति गर्दैनन् भन्ने आम सोचाई छ । यो सोचाईलाई चिर्न पनि म विशेषज्ञ डाक्टर
(एमडी) भएर पनि राजनीतिमा होमिएको छु । डाक्टर भएर पनि समाजसेवा गर्न सकिन्छ, राजनीतिलाई सम्मानित क्षेत्र बनाउँ भन्ने सन्देश दिन पनि म चुनावमा होमिएको छु ।
साथै, संस्थजागत रुपमा बढेको भ्रष्टाचार रोक्ने, विसंगति रोक्ने, कानुन बमोजिम अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउने काममा लाग्छु । पछाडि पारिएकालाई अवसर दिने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी गरिखाने वातावरण बनाउने, शिक्षा, चेतना, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको काम गर्ने एजेण्डा पनि मेरा प्राथमिकतामा छन् ।
तपाईंलाई मत किन दिने ?
पार्टीलाई मत दिने भनेको लोकतन्त्रलाई खतराबाट उठाउने हो । लोकतन्त्रमा मात्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, धर्म संस्कृतिको रक्षा हुन सक्छ । यसकारण लोकतन्त्र को लागि सधैं लडेको र जनतालाई अधिकार दिलाउने पार्टीको उम्मेदवार भएको हुनाले मलाई जनताले मत दिन्छन् ।
संविधान संसोधन गरी मधेसी जनतालाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउने, विभेदबाट मुक्त गराउने, गरिखान पाउने वातवारण बनाउने, समाजमा कानुनले नदिएका काम अघि बढेका छन् यसलाई रोक्ने जस्ता एजेण्डा पूरा गर्ने संकल्प गरेको छु यसका लागि पनि मलाई जनताले मत दिनुपर्छ भन्नेमा छु ।
साथै, म डाक्टरी पेशामा प्रशस्त पैसा कमाउन सक्थें तर, राजनीति बाटै समाज बदलौं, अधिकार दिलाउँ र समाजमा न्याय ल्याउँ भनेर आफ्नो जनसेवाको भावनाले उम्मेदवार बनेको छु । मेरो आफ्नो विश्वासमा जनताले न्याय गर्छन् र जिताउँछन् भन्ने लागेको छ ।
तपाईंले जित्ने आधार के छन् त ?
आफ्नै पेशाबाट धेरै पैसा कमाउने राम्रो जीवनशैली जिउँने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि म निरन्तर राजनीतिमा छु । संगठनको काम गरेको छ । संगठनको कार्यकर्ताले एकल सिफारिस गरेर उम्मेदवार बनाए । यो मप्रति र मेरो निष्ठाप्रति को विश्वास हो । सामाजिक काममा सक्रिय छु । निरन्तर जनसेवाको काम गरेको छु । त्यसैले यसले गर्न सक्छ भन्ने छाप जनता र मतदातामा भएकोले म जित्छु भन्ने लागेको छ ।